Home News Kulanka caawa ee Sharif Xassan iyo Farmaajo maxaa laga filan karaa?
Kulanka caawa ee Sharif Xassan iyo Farmaajo maxaa laga filan karaa?
Waxaa caawa kulan qarsoodi ah ku leh aqalka uu Madaxweyne Farmaajo ka degan yahay Xarunta Villa Soomaaliya MW Sharif Xassan iyo MW Farmaajo. Kulankaan ayaa waxa uu daba socdaa kulan uu galabta Sharif Xassan la qaatay RW Kheyre kaas oo looga hadlaayay sidii loo fashilin lahaa kulanka Kismaanyo. MW Farmaajo ayaa da’daal xoog leh ugu jiro sidii uu u fashilin lahaa shirka Madaxda dowlad Goboleedyadda oo la filaayo in uu ka furmo bisha Sibteembar sadaxdeeda magaalada Kismaanyo. Waxaa muuqato in MW Farmaajo uusan wali faham buuxa ka haysanin hagida siyaasada dalka. Waxaa dad badan la yaban yihiin wax uu ka faa’iidayo in shir la fashiliyo. Waxaa uga fiicnayd in uu ku mashquulo sidii uu usoo afjari lahaa isfaham la’aanta ka dhex jirta dowlad Goboleedyadda iyo Dowladda Dhexe. Sharif Xassan ayaa horay u shaaciyay in uu ka qayb-galayo shirka Kismaanyo islamarkaana si buuxda u taageeri doono go’aanada ka soo baxa shirkaas. Kulankaas ayaa waxaa la filayaa in uu soo saaro go’aano culus oo saamayn ku yeelan doono siyaasada guud ee dalka, baaq culusna u diraya beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis.
Matt Bryden oo ah qabiir ka faalooda arimaha Soomaaliya, madaxna ka ah hay’adda Sahan ayaa bartiisa internetka ku sheegay dhawaan, “cadowga ugu wayn ee hortaagan in laga adkaado kooxda Argagaxisadda ee Al Shabaab iyo in la dhiso ciidan Soomaaliyeed ay tahay qilaafka u dhaxeeya dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyadda.
Previous articleBaarlamaanka Somali State Oo Ansixiyay Madaxweynaha Cusub Ee Maamulkaasi
Next articleWadooyinka Muhiimka Ah Ee Caasimada Oo Saakay Xiran
Waxgaradka ka soo Jeeda Beelaha K/Galbeed ayaa ka Digay Muddo Kororsi...
Shaqsiyaad dilal ka fuliyay Beledweyne oo gacanta lagu dhigay